Madaxweyne Farmaajo” Dhawaan waxaa bilaaban doona howlgalo Shabaab looga sifeynayo gobolada dalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo” Dhawaan waxaa bilaaban doona howlgalo Shabaab looga sifeynayo gobolada dalka
Madaxweyne Farmaajo” Dhawaan waxaa bilaaban doona howlgalo Shabaab looga sifeynayo gobolada dalka
Muqdisho(SONNA) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa saaka salaadda ciidul Adxa Masjidka Shuhadaa ee Madaxtooyada Somaaliya kula tukaday dadweyne farabadan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Max’ed C/llaahi Farmaajo oo khudbad dher jeediyay salaadii Ciidda kadib ayaa soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab, isagoo xusay in dhawaan ay labilaabi doono howlgalo hor leh oo gobolada dalka looga sifeynayo Shabaab,madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday arrimo ay kamid yihiin dhismaha gudiga adeega garsoorka iyo amhiyadda uu u leeyahya dalka.
Madaxweynaha ayaa gacan qaaday qaar ka mid ah dadweyne farabadan oo uu salaadda ciidda kula tukaday Masjidka Shuhadaa, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed mar kale ugu hambalyeeyay munaasabadda cuudul Adxa.
Mudane Max’ed C/llaahi Farmaajo ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed in ay caawiyaan dadka danyarta ah, ayna la shaqeeyaan dowladda F. S. si loo sugo ammaanka guud ee dalka.
Previous articleMadaxweyne Axmed Madoobe”Waa in loo cadaalada falaa shacbka Soomaaliyeed+Sawirro
Next articleMaxakamadda sare ee Kenya oo go’aamisay in dib loogu laabto doorashadii uu ku guuleystay Uhuru Kenyata